Malunga nathi - Shenzhen Yuebaixiang Technology Co., Ltd.
YIqela leThekhnoloji yeBa BaixiangIbe nokuhlakulela die-ukusika iteknoloji ukungunda kangangeminyaka engama-20, ngamandla ukwenza oko, ekugayeni abantu abakhethiweyo, ezimisele ukuba ukufa die-ukusika engcono e-China, nokwenza ihlabathi akukho mishini die-ukusika nzima. Umzi-mveliso wethu ugubungela indawo engaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-3,000. Kukho iitalente ezingaphezu kwe-100 kwi-R & D kunye nemveliso.
Kukho phantse i-50 yokungenisa ngokuthe ngqo kumatshini ojikelezayo we-CNC oomatshini bokukrola imela, oomatshini be-laser, imela yokujikeleza oomatshini bokuhlola imela kunye nezixhobo zokulinganisa ngokuchanekileyo. Ukutshixa isitshetshe, ukungunda kwesixhobo sekhompyutha, ukungunda kwe-QDC, ipleyiti eshushu eshushu, ipleyiti yokukrola yombane, isixhobo sokuqinisa
U-Yue Baixiang ebekwishishini lokubumba imela kangangeminyaka engama-20 kwaye uye waqokelela amava atyebileyo ezonyango. Okwangoku, ngaphezulu kweshumi elinambini leenkqubo ezifumene izatifikethi zepatent yelizwe. Ukongeza kubuchwephesha bokuncedisa iifowuni eziphathwayo, iimveliso ezinobunzima kunye nokuchaneka okuphezulu (njengefoyile yobhedu, ifoyile yealuminium, ifoyile ye-tin, i-oxide yesinyithi, ucingo lwensimbi kunye nezinye izinto zesinyithi kunye nerabha yesilicon, iphepha legraphite, UPE Long), iPC, i-PVC , I-PET kunye nezinye izinto ukufezekisa ukusebenza ngokuzenzekelayo) kwaye zicocekile kwaye zicocekile ngokubhekisele ekususweni kwenkunkuma, i-100% izinzile kwaye ihlala ixesha elide! Zonke izinto zokubumba ziye zenziwa kuvavanyo olungqongqo kathathu ukuya kolune (ukuhlolwa komphetho wemela, ukuhlolwa okuphezulu kunye nokujonga imela okuphantsi, ukuhlolwa kwemveliso yokusika).
Ukwaneliseka kwethu kukuqhubeka kwethu. Sizimisele ukusebenza kunye nenkampani yakho ukuze sizuze kunye kwaye siphumelele kwimeko yokuphumelela! Wamkelekile abathengi abatsha nabadala ukuba batyelele kwaye babakhokele, kwaye ngokudibeneyo baphuhlise ukusika kwetekhnoloji yokusika! U-Yue Baixiang ujonge phambili kutyelelo nakukhokelo lwakho!
Kukho iiseti ezingama-50 zomatshini ochanekileyo wokulungisa i-CNC, izixhobo ezinkulu ze-laser, umatshini wokugoba ngokuzenzekelayo kunye neeseti ezili-10 zomatshini wokukrola, imigca yokudibanisa yokusika kunye nezixhobo zovavanyo ezi-3-nkampani yethu.
Sineqela lobungcali le-R & D.
Ngeminyaka engama-20 yamava obuchule ebaleni.
Tyaba ngokugqibeleleyo elifutshane ixesha uhlengahlengiso tooling kunye nokuphucula ukusebenza yemveliso.
Ukuchaneka okuphezulu kweemveliso ezisweleyo kunye nokubonakala kweemveliso zoshicilelo zokufa kunokuveliswa ngovavanyo kunye nokusetyenziswa kweeDies.
Imigca yokudibanisa ye-Die-cut kunye nezixhobo zokubetha, zinokuzenzela iimveliso kwaye zivavanye ukufa kubathengi.
Vumela umhlaba ungabinabunzima bokufa.
Khokela isikhunta semela ukuze ube lushishini oluxabisekileyo kwihlabathi.
ukuba ngowokuqala kushishino sokubumba imela eTshayina ngo-2024.
Indlela yethu yokusebenza
Unesazela kwaye uyakhawuleza ukubambelela kwisithembiso.
Umgangatho weemveliso ulingana nomlinganiswa.
ukusebenza ngokukuko, ukuvelisa izinto ezintsha, uxanduva, iqela, ukuthembeka.
Ukufa kweLaser, Inkunkuma-Drop Ukuchitha Rotary Die, Imaski Rotary Die, Auto-Material Ukuzalisa mfanekiso Die, Umphezulu Umphezulu mfanekiso Die, Steel Die mfanekiso,